Sida loo rogo ama PDF in EPUB on Mac?
Sida loo rogo ama PDF in EPUB ee Mac OS X Libaaxa
> Resource > PDF in qaabab kale > Sida loo rogo ama PDF in EPUB ee Mac OS X Libaaxa
Laga Helay waa runtii wax aad looga xumaado in uu akhriyo PDF files on aaladaha yar-shaashadda, sida iPhone 5, iPod taabto, ama iPad mini? Dhab ahaantii, by diinta PDF in qaab EPUB, aad doonaa weligiis la dhibayay dhibaatada. Si loogu badalo PDF in EPUB on iMac, MacBook Pro ama MacBook Air ah, waxaad u baahan tahay Wondershare PDF Converter for Mac , qalab xirfadeed si loogu badalo PDF in EPUB eBook. Hoos waxaa ku qoran oo ku saabsan sida loo isticmaalo si loogu badalo PDF in EPUB ee Mac.
Isku day Mac PDF to EPUB Converter! Haddii aad leedahay PC Windows ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare PDF Converter for Windows sidoo.
Tallaabada 1. PDF files Add
Jiid PDF files galay PDF in EPUB Mac Converter, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah macluumaadka guud ee PDF files aad ka dib markii iyaga oo intaa ku daray in liiska qaab beddelidda. PDF to EPUB for Mac Kuu ogolaanaysaa inaad ku darto 50 PDF files waqti.
Tallaabada 2. saarka Customize goobaha (optional)
Riix icon marsho ku file ee la doortay PDF ee uu goluhu ka, waxaa laguu ogolyahay in astaysto page kala duwan oo loogu talagalay files PDF si loogu badalo ka. Default page kala duwan oo loogu talagalay Masiixiga waa bog oo dhan .
Si aad u astaysto folder Ahaado, u tag PDF in EPUB> rabtid ... > meel loo ahaadana iyadaa u dhigay folder wax soo saarka.
Riix EPUB tab in astaysto wax soo saarka files EPUB in faahfaahinta. Waxaa jira 2 fursadaha si aad u astaysto file wax soo saarka: Text iyo sanamyadii in EPUB iyo bogga kasta sida sanam u EPUB .
Text iyo sanamyadii in EPUB: tani waa fursad caadiga ah. Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa inaad beddesho midab qoraalka iyo midabka asalka, ama ay doortaan in ay iska indha images ama hyperlinks ama aan loogu soo saarka EPUB eBook, aawadood oo ah waayo aragnimo reading fiican. Iyo sidan doorto, waxaad bedeli kartaa qoraalka font iyo midabka ah ee wax soo saarka EPUB eBooks on akhristayaasha eBook aad iyo aad u eegto qoraalka balaartay si cad haddii aad doorato Doorashadan.
Page kasta sida sanam u EPUB, doorashooyinkan waa uun u PDF files leh qaabka aad u adag iyo formatting, doorasho default marka aan si fiican u ilaalin formatting ah. Haddii aad doorato Doorashadan, dhammaan bogagga ee faylka EPUB gediyay eegto aad u la mid ah sida file PDF ah, laakiin aadan beddeli karin font qoraalka iyo midabka halka akhriska ee eBooks gediyay EPUB on akhristayaasha eBook aad.
Tallaabada 3. badalo PDF in EPUB
Guji ka badalo button si loogu badalo PDF in EPUB. In dhowr ilbiriqsi, hawlaha qaab beddelidda in la dhameystiro doono. Waxaad si toos ah ka heli kartaa la gediyay EPUB eBook adigoo riixaya E icon on kasta bar PDF item. Fudud, sax? Hadda waxaad si fudud u hagaagsan karaa eBooks EPUB in iPad ee ku go akhriska.
Daawo video tutorial sida si loogu badalo PDF in EPUB ee Mac ah
Beddelaan PDF in EPUB ee Mac hadda!
Sida loo rogo ama PDF in EPUB in Windows 8
Wondershare PDF in Pages u Mac
Beddelaan PDF files waraaqaha ay si buuxda u editable iWork Pages iyo hayn formatting asalka iyo qaabka dhammaataan.
Beddelaan PDF in barasantigareeyaan Excel si sax ah, taas oo wax aad u sahlan u isticmaala inay isticmaalin xogta ee Microsoft Excel.
Sida loo rogo ama PDF in jpeg in OS X Mavericks, Libaaxa ama Mountain Libaaxa
Sida loo rogo ama PDF in PNG ee Mac
Sida loo rogo ama PDF iskaan qoraalka
Top 3 PDF to EPUB Converter Apps u iPhone
Sida loo rogo ama PDF in iWork Pages on Mac
Sida loo rogo ama PDF in Editable Text Files
Sida loo rogo ama PDF in GIF
Google Docs OCR ay u badalaan PDF iskaan qoraalka
Sida loo rogo ama PDF Image qoraalka
PDF Abuuritaanka Talooyin
PDF in qaabab kale
PDF Abuuritaanka Software
PDF in Excel Conversion
PDF hadalka Conversion